Ungazifinyeza njani ii-URLs zeZithuba ze-Twitter
Xa ufumene into ofuna ukwabelana ngayo kuTwitter, kuya kufuneka uyabele ngedilesi ye-Intanethi yeposi (i-URL) ngokuyikopa kwaye uyincamathisele kwi-Twitter. Kukho irubhi - ukhe waqaphela ukuba ezinye ii-URLs zinokuhlala ixesha elingakanani? Nokuba kwimiyalezo ye-imeyile kunye nokuthunyelwa kwewebhu kwenye indawo, ukuchwetheza kwi-URL enkulu kunokuba ngumsebenzi wokwenyani. Isisombululo kukunciphisa ii-URL zakho.
Xa sithetha nge-Twitter, unabalinganiswa abangama-280 kuphela kwi-Tweet nganye. Ke i-Twitter isebenzisa eyayo inkonzo yokunciphisa. Xa uncamathisela i-URL kwi-Tweet, i-Twitter iyayitshintsha kwaye ibonise kuphela oonobumba abangama-22 bokuqala (abanokujongeka ngathi bathule)
Kodwa kukho isisombululo: Iinkonzo ezininzi ezikwi-Intanethi ziya kufinyeza nayiphi na idilesi yewebhu kubungakanani, obunokulawuleka. Ezi nkonzo zaqala njengezixhobo eziluncedo kubantu bemihla ngemihla, kodwa ngoku zisetyenziswa kakhulu ziiarhente zentengiso (jonga ezi ndlela zokuthengisa ze-Twitter) ngenxa yeendlela ezixabisekileyo abazibonelelayo.
Usenokuba ubone ezinye ii-URLs ezimfutshane xa ubusebenzisa i-Twitter. Uyabona nawaphi na amakhonkco ewebhu akhangeleka engenantsingiselo, engenamagama afundekayo? Ukunqakraza ikhonkco elijongeka njengesiyatha kuya kukusa apho ufuna ukuya khona, ngetekhnoloji yemilingo yewebhu.
Zimbini iindlela ezithandwayo ze-URL - TinyURL.com kwaye bitly.com -Isetyenziswa ngoku. kancinci lukhetho olufanelekileyo kuba likunika iphepha lolwazi apho ungabona khona iimetrikhi: bangaphi abantu abacofa ikhonkco lakho emva kokuba ulipapashile. (Ukuba usebenzisa iapp ukuthumela izinto kwangaphambili, uninzi luya kuzinciphisa ngokuzenzekelayo amakhonkco akho kunye nesicelo sakho.)
Umzekelo, nantsi idilesi yewebhu ye-podcast
Ukuba usebenzisa i-URL yokunciphisa isicelo kwiwebhusayithi encinci, unokwabela i-bitlink esisigxina onokuphinda uyisebenzise kwakhona. Ijongeka ngoluhlobo:
Ngaba ufuna ukuzama kancinci ukunciphisa ii-URL zakho ze-Twitter?
Fumana i-URL entle, ende onqwenela ukuyifinyeza kwaye uye kuyo indawo encinci .
Ingcinga efanelekileyo yokubhalisa ngeBitly; indawo ayithumeli ogaxekile. Ngale ndlela, ukuba ufuna ukusebenzisa i-URL yakho efinyeziweyo kwi-intanethi, uya kuba nakho ukuthumela iposi ngokuthe ngqo kwiphepha lenqaku.
Qalisa inkqubo yobhaliso kancinci ngokucofa u-Sayina phezulu kwiscreen
Kwiphepha eliphumela, chwetheza igama lomsebenzisi, idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha njengoko uceliwe. Unokwenza ngokuzenzekelayo iakhawunti usebenzisa iakhawunti yakho yakwaGoogle, yeTwitter, okanye yeFacebook.
Xa ugqibile ukuzalisa izinto eziqhelekileyo, cofa Yenza iAkhawunti, kwaye ungaphakathi- kuko konke oko!
Uhanjiswa ngokuzenzekelayo ukubuyela kwiphepha elincinci lasekhaya, kodwa ngoku liya kujongeka lahlukile.
ipilisi emhlophe gpi a325 percocet
Zimbini iindlela zokusebenzisa kancinci. Ukhetho lolwakho:
Khuphela i-URL ofuna ukuyifinyeza kwiphepha layo lewebhu: Cofa ukuyigqamisa, kwaye ucinezele amaqhosha e-Ctrl kunye no-C kunye. Tshintshela kwindawo encinci kwaye ubeke isikhombisi sakho kwibhokisi yokubhaliweyo ethi Cola ikhonkco ukuze ulifinyeze . Cola i-URL yakho ende ebhokisini ngokucinezela amaqhosha e-Ctrl kunye no-V kunye.
Yiya kwiakhawunti yakho ngokucofa imenyu yehamburger (imigca emithathu okanye emine) ecaleni kwegama lakho kwaye ucofe izixhobo. Ukusuka kwiphepha eliphumela, unokufumana isandiso sewebhu kwisikhangeli sakho sewebhu, okanye usetyenziso lweselfowuni kwifowuni yakho okanye kwithebhulethi. Esi sixhobo sikuvumela ukuba ufake isixhobo esincinci esincinci (ngenxa yoko akufuneki ubuyele kwiphepha lewebhu elincinci) ukwenza ikhonkco elifutshane ngokuthe ngqo kulo naliphi na iphepha kwiwebhu.
Ukucofa ukongeza ulwandiso lwe-Chrome kuya kukusa kwifayile ye- Ivenkile yeGoogle Play apho ungongeza khona ulwandiso kwisikhangeli sakho.
Nje ukuba ifake kwisikhangeli sakho, uya kubona encinci b kwi icon yesangqa phezulu ekunene, ecaleni kwebhokisi ye-URL. Beka isikhombisi semouse phezu kwe b ukwenza iBitmarklet, cofa, kwaye ubambe phantsi konqakrazo. Ukuba eli lixesha lokuqala olisebenzise kancinci, kuya kufuneka ungene kwaye unikeze ulwandiso lwe-Chrome imvume yokusebenzisa iakhawunti yakho encinci. Ewe! Ngoku iyinxalenye yesikhangeli sakho, esilungele ukusetyenziswa. Cofa nje kwi b ukwenza uphawu (ukunciphisa i-URL) ukuze wabelane ngephepha okulo.
I-URL yakho ende ijika ibe mfutshane ngomlingo. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa i-URL efinyeziweyo kwi-imeyile, cofa nje ku Khuphela iqhosha, kwaye i-URL entsha ibekwe ngokuzenzekelayo kwi-Clipboard yakho ukuze uyincamathisele kwi-imeyile okanye umyalezo we-SMS.
Ukuba ungathanda ukwabelana nge-URL yobuhlobo, nokuba ku-Facebook okanye ku-Twitter, cofa iqhosha le-Share. Cofa iwebhusayithi ofuna ukwabelana ngayo emva koko uchwetheze yonke iposti yakho kwibhokisi yokubhaliweyo.
Qaphela: kancinci ngokuzenzekelayo ivelisa isithuba kunye nekhonkco elifakelweyo. Sebenzisa kancinci ngalo lonke ixesha ufumana ibali leendaba elinomdla, inqaku, okanye ividiyo kwiwebhu. Iya kukugcina ngokuchwetheza okuninzi, kwaye iya kwenza ukuba ukwabelana kube lula kakhulu.
Cofa kwiqhosha lokwabelana, kwaye amagqabantshintshi kunye nekhonkco lakho liza kuthumela ngokuzenzekelayo kwi-Twitter-stream okanye kwi-Facebook timeline.
Xa ubuyela kwiphepha lakho elincinci kamva, unokubona ukuba bangaphi abantu abacofe ikhonkco lakho ukuze babone.
Ukuba ucofa indawo yokujonga iiStats link ecaleni kwayo nayiphi na into oyiposileyo, ufumana ingxelo ngeyure-ngeyure kwisenzo. Ungacothisa-ukuskrolela ezantsi kwiphepha leZibalo ukufumana ukuba leliphi elinye ikhonkco ekwabelwana ngalo, kwaye leliphi ilizwe. UKinda unomdla.
Kwakhona, ukusebenzisa kancinci yeyona ndlela ilungileyo yokunciphisa ikhonkco lakho lewebhu kwi-bio yakho ye-Twitter eneempawu ezili-160. Emva kokuba ubeke ikhonkco elincinci kwiprofayili yakho, ungabuyela kancinci kwaye ujonge amanani abonisa ukuba bangaphi abantu abatyelele iphepha lakho.
ipilisi emhlophe embhoxo 115
ipilisi encinci eluhlaza eluhlaza k8
Ngaba yerba iqabane likhuselekile
ungayivali njani inkunkuma
indlela yokusebenzisa i-catheter eyindoda
indlela yokufaka amakhadi evidiyo